Xa umhambi ukhankanya ukutyelela France, Abantu abaninzi kweso cinga Paris. kunjalo, capital yaseFransi asinto nje umzi ezixabisa ukutyelela kweli lizwe lihle, Ukuya eStrasbourg nguye IN entsha. kwezinye iindawo ezininzi zezi njengofanelwe ukwazisa zonke izinto ezintle kunye namava bakwazi ukunikela.
Icawa ukusuka kwixesha ephakathi ukuba ingane, eyoyikisayo, kwaye iyamangalisa ukuyihlola. and eStrasbourg Cathedral uvelele phakathi kwabo - ngokoqobo, njengoko sebenzisa ukuba isakhiwo iphakamileyo ehlabathini de 1874! Ezinye iindawo kulo mhla emva kangangoko 1100, nto leyo umnqophiso yokwenene elide kangakanani le isakhiwo wembali sele emi. Nokuba ukhetha ukuhlola ngaphakathi okanye anamathele ukugubha olungaphambili, uza kuchukumiseka.
EStrasbourg has yesibini ngobukhulu Isikhululo sikaloliwe e France, kanye emva Paris. Ukufikelela ngayo ngololiwe i kuqonde, kwaye unalo ithuba lokuthatha -High speed Uloliwe TGV (uloliwe ohamba ngesantya esiphezulu) Oku kuthatha ukusuka eParis eStrasbourg kuphela 2 iiyure kwaye 20 imizuzu, endaweni yesiqhelo 4 iiyure ngemoto.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi kunye sinike nje ngetyala nesihlanganisi kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-strasbourg-train%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)